ह्वात्तै बढ्यो बैंकको ब्याजदर : मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्ने मालामाल, सेयर बजारमा कस्तो पर्ला असर ? - Arthatantra.com
वि.सं.२०७८ कात्तिक १२ शुक्रवार
ह्वात्तै बढ्यो बैंकको ब्याजदर : मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्ने मालामाल, सेयर बजारमा कस्तो पर्ला असर ?
काठमाडौं । बिहीबार बैंकहरुले असोज महिनाको लागि निक्षेप तथा कर्जाको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सबै बैंकको भने ब्याजदरको सूचना आएको छैन । सूचना जारी गरेका अधिकाशं बैंकको ब्याजदर बढेको छ । अहिले त बैंकको मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्ने बचतकर्तालाई निकै लाभ हुने देखिएको छ ।
अहिले बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव भएसँगै ब्याजदर बढाएका छन् । अहिले प्रणालीमा कर्जाको माग बढ्ने र निक्षेप संकलन कम हुन थालेको छ । जसले गर्दा तरलता अभाव हुन थालेको छ । तरलता व्यवस्थापनको लागि भन्दै बैंकहरुले ब्याजदरलाई हतियार बनाएका छन् । अहिले बजेट खर्च पनि न्यून हुँदा बैंकलाई ब्याजदर बढाउन बाध्यता सृजना भएको हो ।
नबिल बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा बचतमा ४.२६ देखि ६.२६ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । मुद्दती निक्षेपमा ६.५१ देखि ९.२६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । बैंको साउन मसान्तसम्मको आधारदर ५.५२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिने छ । नबिल बैंकबाट कर्जा लिँदा ११.५२ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने छ ।
एनएमबि बैंकले बचत खातामा ४.५२ देखि ६.५२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । मुद्दती निक्षेपमा ७.५० देखि ९.०२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । बैंकले आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिने छ ।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बचत खातामा ३.०६ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । यस्तै मुद्दती निक्षेपमा ८.०६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । असार महिनासम्म बैंकको आधारदर ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । उक्त आधारदरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज लिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा ८.४१ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने छ ।
यता कृषि विकास बैंकले साधारण बचतमा ३.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८.१० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । बैंकको असार मसान्तसम्मको आधारदर ७.१३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कर्जातर्फ बैंकले आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिने भएको छ । बैंकबाट ब्याज लिँदा १२.१३ प्रतिशतसम्म लाग्ने छ ।
एभरेष्ट बैंकले बैंकले बचतमा ३.६१ देखी ४ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । असोजदेखी लागू हुने गरी सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७ देखि ८.६१ प्रतिशतसम्म दिने भएको छ । साउन मसान्तसम्म बैंकको आधारदर ५.८५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले आधारदरमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज लिने गरेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १०.८५ प्रतिशतसम्म लाग्ने छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकले बचतको ब्याज सार्वजनिक गरेको छैन । असोजदेखी लागू हुने गरी सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ४.०५ देखि ८.५५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । साउन मसान्तसम्म बैंकको आधारदर ७.३७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले आधारदरमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज लिने गरेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १२.३७ प्रतिशतसम्म लाग्ने छ ।
यता सनराइज बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजरमा बचत तर्फ ५.०७ प्रतिशत ब्याज पाएने भएको छ । मुद्दती निक्षेपमा भने ५.०७ देखि १०.०७ प्रतिशतसम्म ब्याज रहेको छ ।
बैंकको आधारदर साउन मसान्तसम्मको ७.०१ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा बेस रेटमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १३.०१ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने छ ।
सेञ्चुरी बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदमार बचत तर्फ नै ४.२५ देखि ६.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । यता मुद्दती निक्षेपमा ८ देखि ९.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ ।
बैंकको साउन मसान्तसम्मको आधारदर ७.५५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १३.५५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ ।
असोज १ गतेदेखि नेपाल बंगलादेश बैंकले बचतमा ३.७६ देखि ४.७६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । मुद्धति निक्षेपमा ८.७६ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । बैंकले आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जा दिने भएको छ ।
हिमालयन बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा बचतमा ४.२५ देखि ६.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । मुद्दती निक्षेपमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याजदर भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
यता प्रभु बैंकले असोज १ गतेदेखी बचतमा ३.२५ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । मुद्दती निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । कर्जामा भने आधार दरमा ७ प्रतितशसम्म प्रिमियम थपिने भएको छ । बैंकको साउन मसान्तको आधार दर ७.१० प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १४.१० प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।
यता स्टयान्र्डड चार्टर्ड बैंकले बचतमा २ देखि ४.५ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । मुद्दती निक्षेपमा भने ७.५० प्रतिशतसम्म ब्याज पाएने छ । बैंकको असार मसान्तसम्मको आधारदर ५.५१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ४.५ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको बचत खातामा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । मुद्दती निक्षेपमा ८.२५ देखि ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । बैंकको असार मसान्तसम्मको आधारदर ५.८० प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ७ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ ।
यस्तै सिभिल बैंकले बचत खातामा ४.२५ देखि ६.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने छ । मुद्दती निक्षेपमा ७.५५ देखि ९.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । बैंकको साउन मसान्तसम्मको आधारदर ७.८९ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा लिँदा बैंकले आधारदरमा ७ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज लिने छ ।
प्राइम बैंकले बचत खातामा ४.७६ देखि ५.७६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने छ । मुद्दती निक्षेपमा ८ देखि ९.७६ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । बैंकको असार सम्मको आधारदर ७.२१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ६.९९ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ ।
यस्तै सानिमा बैंकले बचत खातामा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको छ । मुद्दती निक्षेप तर्फ ७ देखि १०.०१ प्रतिशतसम्म ब्याज रहेको छ । बैंकको । साउन मसान्तमा बैंकको आधारदर ६.१४ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा लिँदा आधार दरमा ७ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ ।
एनसीसी बैंकले बचतमा ४.२६ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म पाइने छ । मुद्दती निक्षेपमा ९.२६ प्रतिशतसम्म ब्याज रहेको छ । असार मसान्तमा बैंकको आधारदर ७.५७ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ ।
असोज १ देखि लाग्नेगरी ब्याजदर बढेसँगै यसको असर सेयर बजारमा पनि पर्ने सम्भावना देखिएको बताइन थालेको छ । बैंकमा कर्जाको माग बढ्ने, निक्षेप संकलन कम हुने, कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तो भएका कारण सेयर बजार बढिरहेको थियो । तर बैंकहरुले कर्जाको भन्दा पनि बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ह्वात्तै बढाएसँगै बजारमा पनि असर पर्ने हो की भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ३१ बिहीवार १२:२० मा प्रकाशित
News Views: 1576
अघिल्लाे मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई कान्तिपुर अस्पतालमा विशेष छुट
पछिल्लाे के भईरहेको छ सानिमा लाइफको सेयर ?
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा कति पर्यो आवेदन ?
वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १८:०३
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा ५ हजार ४२५...
मध्य भोटेकोशीको आईपीओ बाँडफाँट भोलि: भाग्यमानी ८ लाख १९ हजारलाई १०/१० कित्ता, तपाईलाई पर्ला त ?
वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १७:३२
काठमाडौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँटका लागि मिति...
बन्द भयो लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन, अब कहिले खुल्छ ?
वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १७:१९
काठमाडौं । सोमबारदेखि सुरु भएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को...
विद्युत् महसुुल दर घटाउने र डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णय स्वागतयोग्य : महासंघ
वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:५९
काठमाडौं । विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने...
एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु
वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:४९
काठमाडौं । एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ ।...
एनआईसी एशिया लघुवित्तले कहिले गर्दैछ बुक क्लोज ?
वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:४१
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारणसभा प्रयोजनका लागि...